Juventus, macallin Allegri, De Sciglio iyo Higuain oo baraha bulshada looga jeexjeexay + Sawirradii Tawitter-ka – Gool FM
Juventus, macallin Allegri, De Sciglio iyo Higuain oo baraha bulshada looga jeexjeexay + Sawirradii Tawitter-ka
Raage August 14, 2017
(Roma) 14 Agoosto 2017 – Waxaa xalay ciyaar cajiib ahayd ku kala baxay kooxaha Juventus vs SS Lazio oo ciyaaray final-ka Super Coppa Italianna oo ku qabsoomay magaalada Roma.
Ciyaartan oo ay Lazio 3-2 ku badisay weliba qaab daramaatik ah ayaa waxaa kaddib baraha bulshada lala tegey kooxda Juve, macallinkeeda Allegri iyo laacibka ku cusub ee Matia De Sciglio oo dhowaan ugasoo biiray dhanka AC Milan.
Waxyaabihii qosolka badnaa waxaa ka mid ah in De Sciglia laga soo bixiyay 12 milyan oo khasaartay, in Allegri uu Juve gaarsiiyay seddexleey guuldarro ah maaddaama koobab looga qaaday 3 final oo xiriir ah oo ka kala dhacay Dooxa, Cardiff iyo Roma.
Laacibiinta kale ee la maagay waxaa ka mid ah qannaaska kooxdaasi ee Gonzalo Higuain oo ay sanad ka hor Juve ku khasirtay lacag ku dhow 100 milyan oo euro.
FC Bayern München oo qandaraas iidheh ah la gashay garoonka Hamad International Airport (HIA) + Sawirro
Mediaset Premium oo ciyaaraha CL fasalkan looga daawan doono qaab ka duwan sidii hore!